ဘင်ဂျမင်ရဲ့ အသစ်ထွက်တဲ့ သီချင်းကို ချီးကျူးစကားပြောရင်း အကြွေးတောင်းခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်း – Suehninsi
အဆိုတော် ဖြူဖြူကျော်သိန်းကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်ခင် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော်.။ ဖြူဖြူကျော်သိန်းကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲကို ရောက်စေမယ့် သံစဉ်စာသားတွေကို သူမရဲ့ ကောင်းမွန်လွန်းတဲ့ အသံနဲ့ သီဆိုနိုင်သူတစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်.။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူထုကြားမှာ ရေပန်းစားတဲ့ တီဗီအစီအစဉ်
ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Myanmar Idol အစီအစဉ်မှာ ဒိုင်လူကြီးအနေနဲ့ အကဲဖြတ်ပေးခြင်းကိုလည်း ပါဝင် လုပ်ဆောင်နေသူပါ.။ ဖြူဖြူကျော်သိန်းကတော့ ဒီနေ့ မေလ (၁၈)ရက်နေ့မှာတော့ သူမကိုယ်တိုင် အကဲဖြတ်ဝေဖန် ဆုံးမပေးမှုတွေနဲ့ အတူ အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ကို စီနီယာပီပီ လက်ဆွဲခေါ်ပေးခဲ့တဲ့Myanmar Idol Season(4)ရဲ့ Runner Up ဖြစ်သူ
ဘင်ဂျမင်ဆုမ်းရဲ့ ပထမဆုံးထွက်ရှိတဲ့ သီချင်းလေး ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်ကာ “Benjamin Sum ရဲ့အသံလှလှလေးရယ်၊ ချင်းတောင်တန်းကြီးရဲ့ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရှုခင်းလေးတွေရယ်? ပေါင်းလိုက်တော့ …ပြန်တွေ့မယ့်ရက် လေးကတစ်ဖြုတ်ဖြုတ် ကြွေရမယ့် အဆွေးသီချင်း ကောင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ် ဖြစ်သွားတော့တာပေါ့ကွယ်.။ Congratulations, Sum..Pathian in lo thlawsuah seh. ကဲကဲ…ကိုကိုဘန်ဘန်ရေ…
ပြန်တွေ့မယ့်ရက် ကျရင်ညီမလေးဖြူဖြူကို ကြော်ငြာခလေး အကြွေးဆပ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်” ဆိုပြီး ဟာသဆန်ဆန်လေးနဲ့ အနုပညာမျိုးဆက်သစ်လေးအတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်တဲ့ အကြောင်းလေးကို တင်လာခဲ့ပါတယ်.။ ဘင်ဂျမင်ဆုမ်းရဲ့ Talent တွေကို ပြိုင်ပွဲဝင်နေစဉ်
အချိန်မှာတည်းက သဘောကျနှစ်သက်ပြီး ဒုတိယဖြူဖြူကျော်သိန်း လို့တောင် နာမည်ပြောင်လေး ပေးခဲ့ပါသေးတယ်နော်..ပရိသတ်ကြီး.။ ပရိသတ်ကြီးအတွက်လည်း ဖြူဖြူကျော်သိန်းကိုယ်တိုင် သဘောကျမဆုံးဖြစ်နေတဲ့ ဘင်ဂျမင်ဆုမ်းရဲ့ ပြန်တွေ့မယ့်ရက် သီချင်းဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို ပြန်လည်မျှဝေ ပေးလိုက်ပါတယ်နော်.။
အဆိုတျော ဖွူဖွူကြျောသိနျးကိုတော့ ပရိသတျကွီးလညျး ခဈြခငျ ရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျနျော.။ ဖွူဖွူကြျောသိနျးကတော့ ပရိသတျတှရေဲ့ ရငျထဲကို ရောကျစမေယျ့ သံစဉျစာသားတှကေို သူမရဲ့ ကောငျးမှနျလှနျးတဲ့ အသံနဲ့ သီဆိုနိုငျသူတဈဦးပဲဖွဈပါတယျ.။ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ လူထုကွားမှာ ရပေနျးစားတဲ့ တီဗီအစီအစဉျ
ပရိုဂရမျတဈခုဖွဈတဲ့ Myanmar Idol အစီအစဉျမှာ ဒိုငျလူကွီးအနနေဲ့ အကဲဖွတျပေးခွငျးကိုလညျး ပါဝငျ လုပျဆောငျနသေူပါ.။ ဖွူဖွူကြျောသိနျးကတော့ ဒီနေ့ မလေ (၁၈)ရကျနမှေ့ာတော့ သူမကိုယျတိုငျ အကဲဖွတျဝဖေနျ ဆုံးမပေးမှုတှနေဲ့ အတူ အနုပညာလမျးကွောငျးပျေါကို စီနီယာပီပီ လကျဆှဲချေါပေးခဲ့တဲ့ Myanmar Idol Season(4)ရဲ့ Runner Up ဖွဈသူ
ဘငျဂမြငျဆုမျးရဲ့ ပထမဆုံးထှကျရှိတဲ့ သီခငျြးလေး ဗီဒီယိုဖိုငျလေးကို သူမရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျကာ “Benjamin Sum ရဲ့အသံလှလှလေးရယျ၊ ခငျြးတောငျတနျးကွီးရဲ့ ရငျသပျရှုမောဖှယျရှုခငျးလေးတှရေယျ? ပေါငျးလိုကျတော့ …ပွနျတှမေ့ယျ့ရကျ လေးကတဈဖွုတျဖွုတျ ကွှရေမယျ့ အဆှေးသီခငျြး ကောငျးကောငျးလေးတဈပုဒျ ဖွဈသှားတော့တာပေါ့ကှယျ.။ Congratulations, Sum..Pathian in lo thlawsuah seh. ကဲကဲ…ကိုကိုဘနျဘနျရေ…
ပွနျတှမေ့ယျ့ရကျ ကရြငျညီမလေးဖွူဖွူကို ကွျောငွာခလေး အကွှေးဆပျဖို့မမနေဲ့နျော” ဆိုပွီး ဟာသဆနျဆနျလေးနဲ့ အနုပညာမြိုးဆကျသဈလေးအတှကျ ဂုဏျယူဝမျးမွောကျတဲ့ အကွောငျးလေးကို တငျလာခဲ့ပါတယျ.။ ဘငျဂမြငျဆုမျးရဲ့ Talent တှကေို ပွိုငျပှဲဝငျနစေဉျ
အခြိနျမှာတညျးက သဘောကနြှဈသကျပွီး ဒုတိယဖွူဖွူကြျောသိနျး လို့တောငျ နာမညျပွောငျလေး ပေးခဲ့ပါသေးတယျနျော..ပရိသတျကွီး.။ ပရိသတျကွီးအတှကျလညျး ဖွူဖွူကြျောသိနျးကိုယျတိုငျ သဘောကမြဆုံးဖွဈနတေဲ့ ဘငျဂမြငျဆုမျးရဲ့ ပွနျတှမေ့ယျ့ရကျ သီခငျြးဗီဒီယိုဖိုငျလေးကို ပွနျလညျမြှဝေ ပေးလိုကျပါတယျနျော.။
သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီဆုကြီး ကံထူးခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းအတွက် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူနေတဲ့ ယုန်လေး
သားသမီးတွေငယ်တုန်းမှာ အမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ထားကြဖို့ ဒါဟာ တန်ဖိုးရှိမှန်းနောက်မှ သိလိမ့်မယ် ဆိုတဲ့ ကိုပေါက်
နန္ဒာလှိုင်က နေမကောင်းဖြစ်ချိန်မှာ သေချာနင်းနှိပ်ပြီး ပြုစုပေးကြောင်းပြောပြခဲ့တဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ